Ciidamada maamulka Jubbaland oo dib u la wareegay degmada Buulo-guduud - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandCiidamada maamulka Jubbaland oo dib u la wareegay degmada Buulo-guduud
January 7, 2017 Abdi Omar Bile Jubaland, Somalia 0
Ciidamada maamulka Jubbaland oo dib u la wareegay degmada Buulo-guduud. [Sawirka: Archive]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ciidamada maamulka Jubbaland oo ay taageerayaan ciidamada Itoobiya ee hoostaga howlagalka AMISOM ayaa dib u la wareegay degmada Buulo-guduud maanta oo Sabti ah, sida ay ilo-wareedyadu sheegayaan.
Kahor inta aysan ciidamada is-garabsanaya gudaha u galin degmada, labada dhinac ayaa ku dagaalamay duleedka Buulo-guduud, sida ay wararku sheegayaan.
Buulo-guduud ayaa ah degmo yar oo qiyaastii 30-km dhanka waqooyiga kaga beegan magaalo xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Ma jiraan warar madax-banaan oo sheegaya khasaaraha ka dhashay dagaalka ilaa iyo hadda.
Al-Shabaab ayaa dibada looga saaray magaalada Kismaayo bartamihii 2012-kii balse wali waxay ku suganyihiin meelo badan oo kuyaala gobolada Jubbooyinka.